Malunga nathi - Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd.
Suzhou Jiarui Oomatshini Co., Ltd. Uyilo olusetiweyo, uphuhliso, imveliso, ukuthengisa njengomnye wabenzi boomatshini beplastiki abaqeqeshiweyo. Kwiidolophu ezikhulayo zale mihla, unxantathu, owaziwa njenge dolophu yase China oomatshini beplastiki, zhangjiagang. Indawo ekuyo ibalasele, kokubini kurhwebo kunye nentsebenziswano kwishishini ilunge kakhulu.
Izixhobo zokurisayikilisha zeplastiki kunye nezixhobo ze-extrusion inkampani yam inamava eminyaka engama-20 yokuvelisa, idibanise iqela lobungcali kunye nezobuchwephesha, inezixhobo zokuchaneka ezifanelekileyo kunye nezixhobo ezixhasayo, inkqubo yemveliso ikhule kakhulu. Okwangoku iimveliso eziphambili zesisila esinzima, isityumzi setreyi, ibhegi yomphanda okhethekileyo into yokusila, umatshini ongatsaliyo / wokuphinda ucheke kabini, umatshini omnye wokutshiza umbhobho / umbhobho omkhulu, umatshini omkhulu wokuhambisa umbhobho, umatshini wokurisayikilisha we-PET, PE / PP yefilimu yokurisayikilisha , umatshini kunye nezixhobo zayo ezincedisayo, umgca weplastiki we-extrusion kunye nezinye iimveliso. Kwangaxeshanye unokubonelela ngokukodwa ngokweemfuno zabathengi kunye nezixhobo ezilahliweyo zokuphinda zisetyenziswe.
Ukuphuhliswa kwenkampani kuye kwabambelela kumgangatho wokuqala, inkonzo yokuqala yefilosofi, rhoqo ukudala ubuchwephesha bemveliso kunye neenkqubo; Ukufuna kwethu ukugqwesa, kwaye sihlala sisomeleza amandla abo; Siyaqhubeka nokuphucula ukubonelela abathengi ngesikimu sokurisayikilisha esibanzi kunye nesisebenzayo kunye neskimu sokukhuphela.
Kumdibaniso wanamhlanje wehlabathi, ilizwe ngalinye liya kuba nonaniselwano olunzulu. Njengomashishini waseTshayina, siya kugcina umbono ophucukileyo "wenziwe e China" ukukhonza abathengi behlabathi.
Siza kuzimisela kwimveliso nasekurisayikelweni kweemveliso zeplastiki, sizise izixhobo ezonga ukonga umbane, kwaye senze nenxaxheba yethu kukhuselo lokusingqongileyo lwehlabathi. Kudala silwela inkolelo yokuba singayihlaziya itekhnoloji ngokukhawuleza, sivelise iimveliso ngokukuko kwaye sisebenzise kwakhona iiplastikhi zenkunkuma ngokusingqongileyo.